စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: နောက်ဆုံး အနမ်း
ဆောင်းပါးရှင် - မောင်ရဲဘော် ( ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော် အရာရှိ တစ်ဦး )
မျက်နှာခပ်တည်တည်ဖြင့် ထိတ်လန့်ခြင်းမဲ့စွာ ဖြေလိုက်သောအခါ “ ဟိုအပေါက်လေးက သွားပါ” ဟု လက်ညိုး ညွန်လိုက်ရာ သံဆူးကြိုးတား ဂိတ်ကလေးရှိရာဆီ ကျနော် ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး ၀င်သွားတော့ သည်။
ကျနော်ပြောသည်ကို သူတို့ နားလည်ပါသည်။ ထိုမှ တဖန် အရပ်ဝတ်နှင့် ရဲတပ်သား တစ်ဦးက ကျနော်နှင့် ကပ်လျှက် လျောက်လိုက်ပါပြီး အ၀င်ဂိတ်ဝဆီ လိုက်ပို့ပါသည်။ သူ့ကို ကျနော်မေးကြည့်ပါသည်။ လစာနှင့် နေထိုင်မှု အဆင်ပြေပါရဲ့လားဟု မေးကြည့်လိုက်သောအခါ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ ဟု ပြန်ဖြေရှာပါသည်။ ဒါဆို ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲဟု ကျနော် မေးငေါ့ပြလိုက်သောအခါ “ မချစ်လည်း အောင့်နမ်း နေရအုန်းမှာပေါ့ ဗိုလ်ကြီးရာ” ဟု ပြန်ဖြေတော့သည်။
It is real....?or story ? If ...isareal....,
I really really proud of you...,And our country need
a lot people like you.....,
AND WE MUST NEED TO DO SOMETHING.......!!
WE HAVE TO GET OUT OF THESE SITUATION.....!!
နောက်ဆုံး အနမ်း မဖြစ်ပါစေနှင့် ဟုလည်း ထပ်မံဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ဆောင်းပါးရှင် (ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး) ကို လေးစားပါတယ်။ တာဝန်သိလို့မိမိတာဝန်ကို အာဇာနည်နေ့ မှာ ကျေပြွန်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင်ကို လေးစားပါတယ် ။
လက်ရှိတပ်မတော်တွင်းက အရာရှိစစ်သည်များ။ အငြိမ်းစားအရာရှိစစ်သည်များလဲ ဆောင်းပါးရှင်လိုဘဲ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပြည်ပရောက် တပ်မတော်လေ စစ်သည်တဦး
Platinum Bird said...
I salute you. You areatrue solider. We needalot of soldiers like you. Carry on! You can write the history.